Iimpawu kunye nokukhangelwa kwamanqaku kumxholo:impilo
Idolo lotyando lokuhlaziya kwakhona: into ekufuneka uyazi
Nangona ukufakelwa kwanamhlanje kuyilelwe ukuba kuhlale iminyaka emininzi, kunokwenzeka ukuba wabelane ngePinterest Xa ukutshintshwa kwedolo kungasasebenzi kakuhle, ukuphinda kwenziwe utyando kuhlala kufuneka. Ngexesha lale nkqubo, ugqirha wotyando utshintsha isixhobo sakudala afake esitsha. Kuyinki
Lithini inqanaba lokubetha kwentliziyo yakho?
Yabelana ngePinterest Inqanaba lentliziyo linani lamaxesha apho intliziyo yakho ibetha ngomzuzu. Ungayilinganisela ekuphumleni (ukuphumla ukubetha kwentliziyo) kwaye ngexesha lokuzilolonga (uqeqesho lokubetha kwentliziyo). Isantya sentliziyo yakho sesinye sezibonakaliso ezinokuthenjwa zokufumana umz
I-Myocarditis sisifo esibonakala ngokudumba kwentliziyo yemisipha eyaziwa ngokuba yi-myocardium -umaleko wemisipha yodonga lwentliziyo. Esi sihlunu sinoxanduva lokungenelela kunye nokuphumla ukupompa igazi ngaphakathi nangaphandle kwentliziyo lize liye kuwo wonke umzimba. Xa esi sihlunu sidumbile, a
Unyango lwe-PSA eqatha: isikhokelo sengxoxo kagqirha
Ukuqonda i-PsA Psoriatic arthritis (PsA) yindlela engapheliyo yokuvuvukala kwesifo samathambo. Ikhula kumalungu aphambili abanye abantu abane-psoriasis. Ngapha koko, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zabantu abane-psoriasis baphuhlisa i-PsA. Kukwanceda oogqirha ukumisela unyango olululo. I-PsA
Zoom uxinzelelo: iindlela ezili-9 zokoyisa ngokulungileyo
Imveliso ye-SDI / ubhubhane we-COVID-19 wenza inyathelo elisekude lisebenze inyathelo elibonakalayo lezizathu zempilo, kodwa ayinguye wonke umntu ofumene utshintsho kwinkomfa yevidiyo kulula okanye inomvuzo. unokunceda ukunciphisa umngcipheko wokuvezwa kwi-COVID-19, kudala imiceli mngeni emininzi em